Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 18)
Doofaarka yar ee qurxoon iyo qorigiisa weyn ee mashiinka ku dhex qarxa Cave
Qarixii Cave waa mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee loo yaqaan 'Arcade Arcade' halkaas oo aan ku yeelan doonno halyeeyo doofaar gaar ah oo saaxiibtinimo leh.
Jilayaasha kartoonada xiisaha lihi waxay la soo noqdaan Paper Monster Recut
Waraaqo wuxuush cut waa waxa cusub ee ku saabsan Studio-ga ciyaarta fiidiyowga ee doonaya inuu na geeyo madal kale oo weyn oo leh sawiro aad u fiican.
Sida loo helo VKWORLD vk700 Pro Phablet kaliya 52 euro
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo helo VKWORLD vk700 Pro oo kaliya 52 Euros oo ay ku jiraan kharashka dhoofinta.
Raywar: Pandemonium, qarxin midabbo badan leh oo shaashaddaada leh oo leh toogta haad
Raywar: Pandemonium wuxuu noo geeynayaa toogte xarrago leh sawiro neon ah oo shaashadda ka buuxin doona dhammaan noocyada qaraxyada.
LEGO Scooby-Doo Haunted Isle, oo ah barxad leh jilayaal caan ah oo ka mid ah taxanaha isboortiga
LEGO Scooby-Doo Haunted Isle waa tacabur leh waxyaabo qarsoon oo lagu xalliyo dhiirigelinta lagu ciyaaro madal.
[APK] Hadda ku soo dejiso nooca cusub ee Facebook ee loogu talagalay Android badhanka cusub ee Like reactions
Waxaan si toos ah kuugu keeneynaa APK qaabka cusub ee Facebook ee loogu talagalay Android badhanka cusub ee Like Reaction
HATOMICO, dalabka aqriya ayaa lagaa helay WhatsApp, Hangouts, Telegram iyo Line adoo gebi ahaanba bilaash ah
Maanta waxaan soo bandhigeynaa App kor u aqrinaya WhatsApp oo la helay, Hangouts la helay, Khad la helay, Telegram la helay, Twitters la helay iyo xitaa ogeysiisyada Google Now.
Nadiifinta quraafaadka batari ee casriga ah
Waxaan u iftiiminnay mid ka mid ah mowduucyada sababay dhibaatada ugu badan tan iyo markii aan helnay taleefan casri ah, nolosha batteriga iyo khuraafaadkeeda iyo halyeeyadeeda.
Sida loogu raaxeysto badhanka cusub ee falcelinta Facebook ee ka socda Android
Maanta waxaan sharraxeynaa dhammaan howlaha cusub ee badhanka falcelinta Facebook iyo sidoo kale sida looga raaxeysto Android kahor intaan si rasmi ah loo cusbooneysiin arjiga rasmiga ah.
Swiftkey wuxuu ku dhawaaqay Neural Alpha, kumbuyuutar cusub oo ku saleysan tikniyoolajiyadda shabakadda neerfaha
Swiftkey waxay noo geynaysaa kumbuyuutar tijaabo ah oo la yiraahdo Neural Alpha oo isku dayaya inuu saadaaliyo ereyada aan ku qori doonno tikniyoolajiyad cusub.
10 astaamo yaryar laakiin xiiso leh oo Android 6.0 Marshmallow ah oo laga yaabo inaadan aqoon
Android 6.0 Marshmallow wuxuu leeyahay taxane ah astaamo yar yar laakiin awood leh oo aan ku sharaxeyno khadadkaan ku jira Androidsis.
Ciyaaraha TOP 4. Ciyaaraha muhiimka ah ee lagu ciyaaro meel kasta
Maanta waxaan ku soo qaadaneynaa kulankaan TOP 4 Casual Games, afar ciyaarood oo aan caadi aheyn oo aadan ku seegi karin boosteejadaada Android.
Sida loo sameeyo WhatsApp si aad u aqriso fariimahaaga cod dheer. (Ama codsi kasta)
Maanta waxaan kugula talineynaa barnaamij wali kujira xaalad beta beta oo aan ku helayno WhatsApp si aan kor ugu aqrino fariimahaaga sida codsi kasta oo lagu rakibay Android-kaaga.
Nooca saafiga ah ee Sony ee 'Concept for Android' wuxuu aadayaa Marshmallow wuxuuna gaarayaa dalal badan
'Fikradda loogu talagalay Android' waxaa loo cusbooneysiiyay Marshmallow si ay u gaarto xitaa wadamo badan iyo ilaa 10.000 tijaabiyayaal beta ah oo iska leh Xperia Z3 iyo Z3 compact.
Sheekooyinka ka soo baxa qaybta Borderlands ayaa hadda ka xor ah Bakhaarka Play Store
Sheekooyinka ka socda Xuduudaha ee TellTale Games waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android. Hadda waxaa lagu heli karaa bilaash qaybtiisii ​​koowaad
Nacnaca ayaa durba ku jira mid ka mid ah afartii qalab ee Android ah
Android 5.0 Lollipop waxaa laga helaa ku dhowaad afartii qalab ee Android ah marka loo eego tirooyinka ugu dambeeyay ee ay bixiso Google lafteeda.
Abka ugu fiican codka barbaraha ee Android
Maanta waxaan kuu soo bandhigayaa App-ka u siman codka ee ugu wanaagsan Android, oo ah barnaamij aad kula qosli doonto asxaabtaada.
Abka ugufiican ee lagu keydiyo batteriga Android
Maanta waxaan soo bandhigayaa waxa dhadhankeyga shaqsi ahaaneed uu yahay App-ka ugu fiican ee lagu keydiyo batteriga ku shaqeeya Android.
Tani waa sida ay Android ugu xuubsiibatay Android 6.0 Marshmallow
Anagoo ka faa'iideysaneyna sii deyntii ugu dambeysay ee Android 6.0 Marshmallow waxaan sameyneynaa dib u eegis muuqaal ah dhammaan noocyada Android illaa muuqaalka
Daqiiqado, waxa cusub ee ka yimid Twitter si aad noogu keento isbeddellada hadda socda ee sawirrada
Twitter-ka ayaa soo saaray muuqaal cusub oo loogu magac daray "Daqiiqadaha" kaas oo aan ugu mari karno kuwa ugu xiisaha badan shabakadan bulshada sawirrada.
[APK] Telegram waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 3.2.3 iyadoo la wanaajiyay Marshmallow
Telegram waa la cusbooneysiiyay si uu uga keeno seddex astaamood oo aad muhiim u ah Marshmallow: Wadaag toos ah, Google Now on Tap, iyo taageerada faraha.
Miyaan ka tagi karaa taleefanka oo buuxinaya habeenkii?
Ma waxaad tahay mid ka mid ah dadka isticmaala ee had iyo jeer ka taga iyaga Android oo dhan amraya habeenkii oo dhan? Waxaan kuu sheegeynaa haddii ay runti tahay mid nabdoon oo sax ah in lagaa qaado sidaad adigu u sameyso.
10ka barnaamij ee kamaradaha ugu wanaagsan ee Android
10 barnaamij oo ka kooban xulashooyinka bilaashka ah, ee ku habboon Android 5.0 API cusub, tafatirka sawir ama qaadashada sawirrada ugu fiican.
Adobe wuxuu sii daayay Sawirka Sawirka iyo Qabashada CC on Android
Adobe ayaa mar kale laba barnaamij ka furaysa Dukaanka Play-ka si kor loogu qaado naqshadeynta iyo hal-abuurka laga helo mobilada gacanta ee loo yaqaan 'Android Illustrator Draw and Capture CC'.
Android 6.0 waxay timaaddaa Nexus 5, 6, 7, 9 iyo Player iyadoo loo marayo OTA iyo sawirrada warshadda
Qalabka Nexus wuxuu hadda marin u heli karaa soo degsashada gacanta ee OTAs iyaga oo cusbooneysiinaya Android 6.0 Marshmallow.
Liis cusub ayaa lagu sifeeyay boosteejooyinka heli doona Android 6.0 Marshmallow: haa, Galaxy S5 sidoo kale waa la cusbooneysiin doonaa
Liis ayaa xaday oo muujinaya telefoonnada shirkadaha soo saara kuwaas oo heli doona Android 6.0 Marshmallow sanadka oo dhan.
Soo dejiso oo rakib TWRP Xiaomi Redmi Note 2
Maanta waxaan ku tusineynaa talaabo talaabo ah sida loo rakibo TWRP Xiaomi Redmi Note 2.
Sida loo cusbooneysiiyo Xiaomi Redmi Note 2 Miui V7 iyo Root
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo cusbooneysiiyo Xiaomi Redmi Note 2 ilaa Miui V7 oo si toos ah ugu xidid isla nidaamka isla markaana ilaali damaanada alaabta rasmiga ah.
TUFFS waxay u qaadataa barnaamijyada aad ugu jeceshahay galka ogeysiiska mobilkaaga
TUFFS waa codsi cusub oo kuu oggolaanaya inaad barnaamijyada aad jeceshahay u qaadatid guddiga ogeysiiska ee moobilkaaga ama kiniinigaaga Android.
Peggo ee loogu talagalay Android wuxuu u rogaa Soundcloud iyo YouTube maqal si dib loogu ciyaaro offline
Peggo for Android waa codsi ka yimaada miiska kombiyuutarkaaga si aad uga duubto codka Soundcloud iyo YouTube.
Google Keep, oo laga yaabo inuu yahay barnaamijka ugu wanaagsan ee xusuus qorista ee Android
Google Keep ayaa sii fiicnaaneysay waqti ka dib si ay u bixiso isku darka ugu fiican ee waxa ay tahay in si deg deg ah loo qoro iyo waxa astaamaha horumarsan
Blockquest, oo ah RPG iskuul duug ah oo leh qaab muuqaal ah oo loo yaqaan 'Crossy Road'
Blockquest waa jawharad yar oo cusub oo aan maanta ka ogaanay Androidsis isla markaana kugu cajabin doonta RPG-ga iyo qaab muuqaal ah
Disney Infinity Toy Box 3.0, ku abuur khibrad aad ku ciyaareysid wax ka badan 80 xaraf oo aad meesha ku jirto
Waxaad la ciyaari kartaa ilaa 80 astaamo oo kala duwan oo ku yaal Disney Infinity Toy Box 3.0, oo ah sanduuq ciid ah oo aad ka abuuri karto khibrad ciyaareed kuu gaar ah.
Sida loo Cusbooneysiiyo Xiaomi Redmi Note 4G ilaa Miui V7 Android 5.0.2 rasmi
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo cusbooneysiiyo Xiaomi Redmi Note 4G ilaa Miui V7.
Rasmiga rasmiga ah ee LG wuxuu cusbooneysiiyaa Android 6.0 Marshmallow
Liistada kooban ee cusbooneysiinta rasmiga ah ee LG ee ku saabsan Android 6.0 Marshmallow, ka mid noqoshada LG G2 ayaa mar kale lagu xantaa, taas oo dad badani u arkaan inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Android terminals' ee ay dalal badan soo saareen taariikhdooda.
Ciyaaraha tartanka 'EA Games' ayaa ku soo laabta Baahida Xawaare: Xaddid La'aan
U Baahan Xawaare: Xaddid La'aan waa ciyaar fiidiyow ah oo si gaar ah loogu sameeyay aaladaha mobilada ee leh qaab lacag-bixin yar oo xoog badan.
Rasmi rasmi ah Motorola ayaa u cusbooneysiisay Android 6.0 Marshmallow
Kuwani waa boosteejooyinka la qiyaasi karo ee lagu daray liiska cusbooneysiinta rasmiga ah ee Motorola ee Android 6.0 Marshmallow
Rasmiga ah ee Sony ayaa u cusbooneysiiya Android 6.0 Marshmallow
Kuwani waa kuwa loo doortay sharafta liiska Sony ee cusbooneysiinta rasmiga ah ee Android 6.0 Marshmallow.
Xilliga barafka wuxuu ku soo noqonayaa mobiilkaaga Ski Safari 2
Arcade-kii ugu fiicnaa ayaa dib ugu soo laabtay Ski Safari 2 iyo wali, boodbooyin, gawaarida gawaarida iyo astaamo kale oo ka dhigay mid caan ku ah qeybtiisa koowaad.
Steam Ayaa Cusboonaysiin Weyn Ku Sameeyay 2.1: Ka Ganacsi Shayga, Goobaha Ciyaaraha, Faallooyinka, iyo Inbadan
Steam wuxuu horeyba u oran karaa inuu leeyahay dhammaan xulashooyinka nooca desktop-ka ee nooca cusub ee 2.1 ah.
Rasmi Samsung ayaa cusbooneysiisay Android 6.0 Marshmallow. Samsung Galaxy S5 waa laga tagay
Kuwani waa rasmiga ah Samsung Updates ee Android 6.0 Marshmallow, liiska qalabka ay shirkadda caalamiga ah ee Kuuriya ay qorsheyneyso inay cusbooneysiiso Android 6.0 Marshmallow
DAEMON Sync wuxuu kuu ogolaanayaa inaad iskula dubarido faylasha shabakada Wi-Fi ee deegaankaaga
DAEMON Sync wuxuu noo keenayaa dhammaan khibrada DAEMON Qalabka waayo-aragnimada ah ee loogu talagalay adeegga Android ee isku-dhafan faylka iyada oo loo marayo isla shabakadda Wi-Fi
Stagefright, u nuglaanta halista ah ee Android, ayaa mar kale weeraraya
Laga soo bilaabo Zimperium waxay ka heleen kharibaad cusub oo Android ah oo ka faa'iideysanaya maktabadaha maktabadaha badan ee Android iyaga oo fiirsanaya faylasha maqalka
Android Auto wuxuu bilaabi doonaa inuu yimaado sanadka 2016 qaababka GMC
Android Auto wuxuu bilaabi doonaa inuu yimaado 2016 gudaha Mareykanka moodooyinka ugu horeeya ee soo saaraha GMC.
[APK] Soo dejiso hadda nooca cusub ee Sawirada Google oo ay la socoto taageerada Chromecast iyo calaamadaha dadka
Maanta waxaan dhammaantiin idinla wadaageynaa nooca cusub ee Sawirrada Google oo qaab APK ah gacanta loogu rakibayo ka hor inta uusan rasmi ahaan u imaanin Dukaanka Play.
Akhlaaqda iyo faa'iidooyinka Android 6.0 Marshmallow
Android 6.0 Marshmallow wuxuu leeyahay seddex faasas sida aasaasiga u ah aasaasiga: Google on Tap, xakameyn ballaaran iyo waxtarka batteriga oo la hagaajiyay.
Kuwani waxay noqon doonaan Nexus lagu cusbooneysiin doono Android 6.0 Marshmallow
Google ayaa ku dhawaaqday in Nexus 5, 6, 7, 9 iyo Nexus Player ay heli doonaan Android 6.0 marshmallow usbuuca soo socda oo dhan.
Raac bandhigga Google si toos ah safka 0 (Gelinta) oo ogow dhammaan wararka Google
Halkan waxaan idinkaga tagnay qulqulka bandhigga Google si aad ugu raaxeysan kartaan si toos ah meel kasta oo aad rabto.
Google Pixel C wuxuu noqon doonaa kiniin Android ah oo leh 10,2 ″, kumbuyuutar furi kara iyo Android Marshmallow
Google Pixel C ayaa beddeli doona Pixelbook Pixel wuxuuna la imaan doonaa shaashad 10,2 "ah, NVIDIA X1 chip iyo 3GB RAM
Shakhsiyan shakhsi u samee Samsung Galaxy oo leh 57 mawduucyo cusub
Shakhsiyan shakhsi uga dhig Samsung Galaxy-ga 57 qodobkan cusub ee Samsung ay ku dartay bakhaarkiisa.
Miyaan awoodi doonaa inaan ku cusbooneysiiyo moobilkeyga Android 6.0 Marshmallow?
Android 6.0 Marshmallow wuxuu imaan doonaa berri Nexus-ka cusub, laakiin sidoo kale miyaad ku haysataa moobilkaaga?
Pulsar, oo ah muusig muusiko bilaash ah oo soo saara liisaska liistada smart
Pulsar waa muusig muusig gebi ahaanba bilaash ah oo aad ku jeclaan karto liistada liistada caqliga leh iyo Naqshadeynta Qalabka
Daadinta cusub ee Huawei 6P waxay xaqiijineysaa qaar ka mid ah faahfaahinteeda: batari 3.450 mAh iyo jirka birta ah
Awoodda la og yahay ee batteriga Huawei 6P, madax-bannaani weyn ayaa la filayaa inay awood u yeelato maalinta ama xitaa ka sii badan iyada oo aan lacag laga qaadin
Litron, oo ah ciyaar xujo-gadaal ah oo gadaal ka soo jeeda oo ay dhiirrigelinayaan fasal-sideetameeyadii iyo sagaashamaadkii
Litron waa arcade retro ah oo ay dhiirrigelinayaan kuwii siddeetamaadkii iyo sagaashannadii oo runtii kugu dhejin doona fudeydkeeda ciyaarta.
Haddii aad xididaysan tahay, Android Pay ma shaqeyn doonto Raadi sababta!
Wax soo saarka cusub ee beddeli doona Wallet wuxuu ballan-qaadayaa inuu waxyaabo badan ka beddelayo adduunka Android. Laakiin, Google Pay la jaanqaadi meyno boosteejooyinka xididka la ah.
Sky, xujo sida ciyaarta fiidiyowga oo boodbooyinku muhiimad weyn leeyihiin
Sky waa xujo leh heerar badan iyo qaab muuqaal ah oo soo jiita dareenka kulanka ugu horeeya. Ciyaar fiidiyow ah oo gaar ah oo bilaash ah.
Cyanogen waxay hadda siisaa taageero rasmi ah Moto G iyo Moto E
Cyanogen ayaa hada shaacisay in labada Moto G iyo Moto E ay taageero rasmi ah uheli doonaan ROMS-kooda
Ma u baahanahay antivirus ku saabsan Android? Jawaab malaayiin dollar ah
Antivirus-ka ku shaqeeya Android wuxuu noqon karaa qalab kaabaya amnigaaga. Laakiin runti maahan inay leeyihiin barnaamijyo?
Noqo Arsene Wenger oo kujira Champ Man 16
Champ Man 16 wuxuu soo jeedinayaa inuu noqdo tababaraha kubada cagta si uu u galo horyaalada ugu fiican adduunka.
Kooxda Fifa 16 Ultimate Team, waxaa macquul ah ciyaarta kubada cagta ee ugu fiican xilligan
FIFA 16 Ultimate Team waa daabacaadda cusub ee sheekadan caanka ah ee kubbadda cagta oo la imaanaysa qaab kaararka xiisaha leh si loogu beddelo xiddigaha
Sida loo weyneeyo sawirada Android
Maanta waxaan kugula talineynaa Photo Resizer HD, mid ka mid ah codsiyada yar ee loogu talagalay Android ee awood u leh in lagu sawiro sawirada qaab ballaaran oo gebi ahaanba bilaash ah.
Sida loo xannibo wicitaanada iyo SMS-ka ku jira terminal-kaaga Android
Maanta waxaan ku tusineynaa barnaamij bilaash ah oo naga caawin doona inaan ka hortagno wicitaanada iyo SMS-ka Android.
Bluboo XFire, taleefan casri ah oo wata 64-bit chip, Android Lollipop 5.1 iyo 4G oo ah 55 euro
Bluboo XFire waa terminal shiineys ah oo la yimaada qeexitaanno aan dhihi karno waa wax cajiib ah qiimaha uu haysto, wax aan ka badnayn 55 euro.
Adeegyada Google Play waxay isu diyaariyaan imaatinka Marshmallow iyadoo horumar lagu sameeyay API-yada
Android 6.0 Marshmallow maalmo ayuu nala joogi doonaa taasna waxay ka dhigan tahay in Adeegyada Google Play 8.1 ka hor imaanshahooda.
Android 6.0 Marshmallow oo ku taal Nexus 5 iyo 6 laga bilaabo Oktoobar 5
Cusbooneysiinta cusub ee Android waxay imaan kartaa laga bilaabo bisha Oktoobar 5 ee soo socota qalabka Nexus 5 iyo Nexus 6.
Microsoft waxay soo saartay Kooxaha Muuqaalka ee 'Android' iyadoo qayb ka ah Office 2016
Kooxaha 'Outlook Groups' waa barnaamijka cusub ee Microsoft ee qayb ka ah Office-kan cusub ee 2016-ka kaas oo kaa doonaya inaad haysato Office 365 oo aad adeegsato
Xayeysiinta Google Store si loogu dabaaldego 7 sano oo Android ah
Dukaanka Google wuxuu la wadaagayaa taxane taxane ah oo loo dabaaldegayo 7 sano ee Android iyo sidaas darteed tirada noocyada aan helnay
Akadamiyadda 'Khan Academy' waxay u keentaa barashada dhammaan noocyada maadooyinka taleefankaaga Android
Akadamiyada Khan waa barnaamij barasho oo internetka ah oo aad ka baran karto noocyo badan oo maadooyin ah sida sayniska, maaliyadda ama taariikhda farshaxanka.
Sida loo beddelo xallinta sawirrada laga soo qaado Android si aad u fudud
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loogu beddelo xallinta sawirrada ka soo baxa boggaaga 'Android terminal' qaab aad u fudud.
Trick Android: Sida loo soo dejiyo waxyaabaha lagu marti qaaday Mega iyada oo aan lagu rakibin barnaamijka Android
Maanta waxaan ku tusineynaa khiyaanadan fudud ee Android taas oo noo oggolaan doonta inaan soo dejino waxyaabaha lagu martiqaaday Mega iyada oo aan lagu rakibin barnaamijka Android.
Safedownloadapps, xayeysiinta dhibsada ee weerara taleefannada casriga ah iyo kiniiniyadayada
Safedownloadapps waa furin ama fayras awood badan oo ku soo dhex dhuuntay Google iyada oo loo marayo Adsense, oo ah aaladdeeda lagu gelinayo xayeysiinta bogagga wweb.
Sida loo calaamadeeyo sawirrada Android-kaaga
Maanta waxaan sharaxaad ka bixineynaa sida loo dhigo calaamadaha astaamaha sawirkeena ka imanaya saldhigayaga gaarka ah ee loo yaqaan 'Android terminal' hab fudud oo fudud oo leh barnaamij gebi ahaanba bilaash ah
Web Scrapbook, barnaamijka ugu fiican ee lagu qaado shaashadda bogagga shabakadda
Maanta waxaan soo bandhigeynaa Buug-gacmeedka 'Web Scrapbook', oo ah barnaamijka ugu fiican ee lagu qaado shaashadda bogagga shabakadda.
Sida loo cusbooneysiiyo Oneplus 2 Oxygen OS 2.1 gacanta
Waxaan horeyba halkan ugu haynaa cusbooneysiinta cusub ee Oxygen OS 2.1 ee loo yaqaan 'Oneplus 2', oo ah cusbooneysiin leh horumarin muhiim ah oo ku saabsan kamaradda, muuqaalka iyo waxqabadka terminal.
Sida loo kordhiyo xawaaraha Chrome, biraawsarka Google
Maanta waxaan ku tusineynaa xeelad noo oggolaan doonta inaan kordhinno xawaaraha Chrome dhammaan noocyadiisa.
Minimal Todo, oo ah barnaamij bilaash ah iyo Naqshadeyn Maaddadeed oo lagu maareeyo dhammaan noocyada hawlaha iyo liistooyinka la qabanayo
La soco dhammaan howlaha iyo waxyaabaha la qabanayo maalinta leh Minimal Todo, oo ah barnaamij gebi ahaanba bilaash ah Qalabka Qalabka.
[APK] Soo degso nooca cusub ee Google Clock oo si tartiib tartiib ah ugu kordhay mugga qeylo-dhaanta iyo inbadan
Nooca 4.2 ee barnaamijka Google Clock wuxuu helayaa awood uu si tartiib tartiib ah u kordhiyo mugga digniinta isla markaana u beddelo dhawaaqa saacadda.
Omate waxay soo bandhigeysaa dharkeeda cusub ee TrueSmart + oo la shaqeeya Android 5.1 Lollipop
Omate TrueSmart + waa weara la xirayo oo lagu garto lahaanshaha nooca buuxa ee loo yaqaan 'Android Lollipop' oo laga gudbo Android Wear.
[MOD] Sida loo rakibo barnaamijka loo yaqaan 'Xperia Z5 Launcher' ee loo yaqaan 'Android Lollipop'
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo Launcher-ka Xperia Z5, oo ah calankii ugu dambeeyay ee jaaliyadaha Japan.
Kordhi xawaaraha Android-kaaga adigoo curyaaminaya animations-ka. Khuraafaad ama Xaqiiq?
Suurtagal ma tahay in la kordhiyo xawaaraha Android-kaaga adiga oo deactivating animations-ka ka shaqeeya?. Waxaan kuu sheegeynaa runta oo dhan iyo wax aan ka ahayn runta ku saabsan quraafaadkan Android.
DIGNIINKA ANDROID !! Ghost Push: liiska dhammaan barnaamijyada cudurka qaba iyo tallaalka
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa liiska barnaamijyada uu ku dhacay Ghost Push iyo sidoo kale tallaalka ama daaweynta jeermiska.
[Trick WhatsApp] 2 Siyaabood oo loo kaydiyo WhatsApp
Maanta casharkaan cusub waxaan kusoo bandhigeynaa 2 dariiqo oo lagu kaydiyo WhatsApp.
Hooska, ama maxay noqon laheyd aragtida midabka loo adeegsaday Tetris
Hooska waa ciyaar la mid ah Tetris oo midabkeedu muhiimad gaar ah u leeyahay sii wadista horumarka iyo kasbashada dhibcaha
Evolution Planet, abuur oo kobciya dhammaan noocyada noolaha ku jira halxiraalaha xiisaha leh
Evolution Planet waa goob arcade ah oo aan ku qasban nahay in aan isku darsano seddex abuur si aan ugu xuubsiibno midka soo socda sidaasna aan ku xalino dhamaan heerarka
HOMTOM HT6, taleefanka casriga ee cusub ee Doogee oo wata batari weyn oo 6250 mAh ah oo balan qaadaya 3 maalmood iyada oo aan lagu dallacin adeegsi xoog leh
Doogee wuxuu na ogeysiinayaa bilaabida HOMTOM HT6, terminal cusub oo hoos imanaya nooc hoosaad wata batari weyn oo gaaraya 6250 mAh oo balan qaadaya ismaamul weyn.
Tareenka Waraaqaha: Rush, orodyahan aan dhammaad lahayn oo leh qaab muuqaal ah oo gaar ah
Tareenka Waraaqaha: Rush waa orodyahan aan dhammaad lahayn oo u taagan qaabkiisa garaafka gaarka ah iyo nuxurka wanaagsan ee lagu raaxeysto in muddo ah.
Dalbasho & Fowdo 2: Furasho, MMO wanaagsan oo ka socota Gameloft oo toos ugu socota shaashadda taleefankaaga casriga ah
Dalbasho & Fowdo 2: Furashadu waa Gameloft's sharad cusub oo loogu talagalay nooca MMO ee ku saabsan Android, markaa ma seegi kartid.
Xafiiska Lens, aniga ahaan mid ka mid ah barnaamijyada ugu xun ee Android Scanner Apps
Inta lagu jiro barnaamijyada 'Scanner Apps' ee 'Android Scanner Apps', shaki la'aan iyo had iyo jeer ra'yigeyga shaqsiyadeed, Xafiiska Lens waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu xun ee Android Scanner ee aan awoodo inaan ku tijaabiyo barnaamijkeyga Android waana sababta aan u go'aansaday inaan ku tuso waxyaabaha kale ee aan ku beddeli karo Lens Office .
Ku soo dejiso sawirrada 'Androidsis Wallpapers' si bilaash ah si aad ugu muujiso barnaamijkaaga 'Android'
Maanta waxaan kuu dhaafeynaa dhowr sawir oo leh astaamaha Androidsis, taas oo ah, Waraaqaha Androidsis.
6 ciyaarood oo fiidiyow ah oo cusub oo aan ka maqnaan karin NVIDIA Shield-kaaga
NVIDIA Shield jiilkeedii seddexaad ayaa ah barxad dhan oo lagu heli karo kulamada ugu fiican ee Android sida Hotline Miami 2.
[Trick WhatsApp] Sida loo ogaado cidda akhriday farriimaha koox WhatsApp ah
Maanta waxaan kuu keenaynaa khiyaanadan WhatsApp si aad u ogaato cidda akhriday farriimaha koox WhatsApp ah.
Sida password loo ilaaliyo akoonkaaga WhatsApp
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo password aad u ilaaliso koontadaada WhatsApp si aad uga ilaaliso muuqaalka xiisaha leh.
KOOXDA KOOXDA ANDROID !!: Fayraska awood u leh inuu beddelo nambarkaaga Android
Tilmaamkan 'ANDROID ALERT' waxaan kugu wargalineynaa fayras cusub oo awood u leh inuu bedelo PIN-ka kumbuyuutarkaaga ee 'terminal'.
Android hack: sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo dhammaan e-mayllada aan la aqrin
Maanta waxaan sharraxeynaa khiyaano Android ah, ama halkii ay ahayd khiyaano Gmail ah oo noo oggolaan doonta inaan kala sifeyno dhammaan emayllada aan akhrinno.
Goor dhow waxaad awoodi doontaa inaad ku shubto ciyaaraha fiidiyowga ee Android-ka YouTube-ka
YouTube ayaa dhawaan soo bandhigi doonta suurtagalnimada in lagu soo daayo ciyaaro waqtiga dhabta ah adeegooda loogu talagalay taleefannada casriga ah ee Android iyo kiniiniyada
Isticmaaluhu wuxuu maamushaa inuu dhaafo qufulka moobiilka ee Lollipop isagoon aqoon PIN ama nambarka
Isticmaale ayaa soo helay nuglaansho nugul oo ku lug leh PIN ama qufulka amniga furaha ee Android Lollipop.
Trick Android: Sida Loo Helo Ciyaaraha Qarsoon ee Chrome ee loogu talagalay Android
Maanta waxaan kuugu sharxeynaa khiyaanadan Android, sida loo helo ciyaarta qarsoon ee Chrome ee loogu talagalay Android.
Sida loo been abuuro meesha ay ku yaalliin terminaalkeena Android
Maanta waxaan kuu keenaynaa xeelad Android ah oo lagu been abuurayo meesha uu ku yaal terminaalkeennu.
[APK] Hadda soo dejiso nooca cusub ee Nova Launcher oo wata astaan ​​caadi ah
Nova Launcher wuxuu noo keenay astaamo hagaajinaya qaabeynta khaanadda abka iyadoo caadi laga dhigayo cabirkiisa loona beddelayo si loo raaco qaanuunka.
Wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato qalabka Photoshop Mix ee agabkiisa wax-jarista cajiibka ah
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo qalabka wax-soo-saarka 'Photoshop Mix' ee xiisaha leh, kaas oo aniga ahaan mar horeba ahaa codsi muhiim ah oo ku saabsan aaladaha Android-ka.
Sidee looga soo kabanayaa shaqadii lumay ee Kit Kat si aad u awoodo inaad ku rakibto codsiyada MicroSD
Maanta waxaan muujineynaa hab fudud oo lagu soo kaban karo shaqadii lumay ee Kit Kat si loo awoodo in lagu rakibo barnaamijyada MicroSD.
[APK] Soo dejiso RouterKeygen iyo habka loo adeegsado in lagu khafiifiyo furayaasha Wifi
Maanta waxaan ku tusineynaa sida RouterKeygen looga soo dejisto goob aamin ah iyo waliba habka rakibaadda iyo habka saxda ah ee loo adeegsado RouterKeygen.
HTC One A9 wuxuu noqon lahaa taleefankii ugu horreeyay ee aan Nexus lahayn ee wata Android 6.0 Marshmallow
Maalinta loo xushay ku dhawaaqista HTC One A9 ee la imaan doonta Android 6.0 Marshmallow waxay noqon doontaa Sebtember 29 marka Nexus la soo bandhigo.
[APK] Sida loo rakibo Photoshop Mix on loox Android ah
Maanta waxaan ku tusineynaa habka saxda ah ee loo soo dejisto oo loogu rakibo Photoshop Mix miiska loo yaqaan 'Android Tablet'.
U dabbaaldeg sannad-guuradii 30-aad ee Super Mario Bros adoo ku ciyaaraya cayaarta asalka ah ee NDS si bilaash ah Android-kaaga. Waxaan ku tusaynaa sida loo helo
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loogu ciyaaro Nintendo Super Mario Bros asalka ah Android-kaaga, markan, waxaan kugula talineynaa emulator-ka ugu wanaagsan ee NDS ee Android, adiga oo ku siinaya Rom-ka ciyaarta asalka ah isla markaana ku baraya sida loo isticmaalo emulator-ka.
Sida loo adeegsado akhristaha faraha si aad ugu gasho shabakadaha bulshada
In kasta oo akhristaha faraha uusan aad u baahsaneyn, waxaan kuu sharxeynaa sida wanaagsan ee looga faa'iideysan karo loona isticmaali karo si loo aqoonsado naftaada bogagga internetka ee kala duwan.
Sida loo abuuro fiidiyowyo qosol badan oo puppy puppy leh wejiyadaada
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo abuuro fiidiyowyo qosol badan oo puppy puppy ah oo wejiyadaadu fulinayaan ficilo kala duwan oo aad ku bilaabayso qosol.
Sida loo dhajiyo waraaqo kala duwan mid kasta oo ka mid ah bogagga desktop-ka
Waxaan ku baraneynaa, iyada oo loo marayo app-ka saddexaad, sida loo dhajiyo waraaqo kala duwan mid kasta oo ka mid ah bogagga desktop-ka ee ku yaal Android.
7 ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee carruurta yaryar ee guriga ku jira
Iyada oo 7-kan barnaamij lagu abuurayo, awoodda fahamka ama xitaa barashada luqadda ayaa lagu dhiirrigelin doonaa carruurta ama kuwa yaryar ee guriga ku jira.
Ujeedo fiisikiska ciyaar ahaan cudurdaarka ugufiican ee lagu baashaalo Stupid Zombies 3
Stupid Zombies 3 waa ciyaar fiidiyoow ah oo leh fiisigis shey oo ah xarunta ay ku ciyaarto ciyaarta Birry Birds.
Ciyaaryahan cusub oo Nexus ah ayaa dhex mara FCC
Google wuxuu soo bandhigi karaa inta lagu jiro dhacdada soo socota ee Sebtember 29, jiil cusub oo ka tirsan Nexus Player.
Nibblers waa sharadka cusub ee Rovio ee qaabka Candy Crush
Nibblers waa ciyaarta fiidiyowga cusub ee Rovio ee naga qaadeysa ka hor makaanik ciyaarta oo aad ugu eg Candy Crush iyo xujooyin kale oo badan.
Nova Launcher ayaa cusbooneysiineysa si ay u beddesho astaanta u dhiganta
Haddii wax lagu tilmaamo Android waa aaladda. Waad ku mahadsan tahay xorriyadda nidaamka hawlgalka furan ee ...
1000 Gb oo ah kaydinta daruurta bilaashka ah ee QuickPic
QuickPic wuxuu na siiyaa 1000 Gb oo ah kaydinta daruurta bilaashka ah oo leh noockeedii ugu dambeeyay ee la heli karo.
Sida loo daawado Atlético de Madrid VS FC Barcelona oo bilaash ah
Laba siyaabood oo loogu daawado Atlético de Madrid VS FC Barcelona si bilaash ah Android oo aan u dhiman isku dayga.
MicRogue, si toos ah munaaradda mugdiga ah seeftaada iyo gaashaankaaga
MicRogue waxay na geynaysaa gurguurta godka laakiin leh danaha kale iyo qaababka ciyaarta si ay noogu qalqaliso farsamadeeda ciyaarta.
Ciidanku ha kula jiro Star Wars: Revolution
Star Wars: Kacaanku waa qayb cusub oo ka mid ah sheekadan khiyaaliga ah ee sayniska taas oo aan ku awoodi doonno inaan ka mid noqono caalamka George Lucas
Abuur Qoraallo Degdeg ah iyo Tilmaamo Waxqabadyo leh Xusuusin Xusuusin
Xusuusinta Memo waa barnaamij aad u xiiso badan oo lagu abuuro qoraalo deg deg ah isla markaana lagu hagaajiyo barta ama falalka ku jira si loo bilaabo noocyada kala duwan ee barnaamijyada
Super Mario Bros ee loogu talagalay Android iyada oo aan loo baahnayn emulator
Ciyaaraha 64 - Super Max Adventure, ama waxa lamid ah ogolaanshaha Nintendo, Super Mario Bros ee loogu talagalay Android iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo emulator kasta.
U qaabee shaashadda shaashadda barnaamij kasta oo leh Swivel for Android
Swivel waa barnaamij cusub oo kuu oggolaanaya inaad u habeyso jihaynta barnaamij kasta, oo waliba ay ku jiraan jihada.
Android 5.0 Lollipop wuxuu horeyba ugujiraa 21% qalabka soo galaya Play Store
Android Lollipop wuxuu hadda ku jiraa 21 boqolkiiba qalabka galaya Play Store bil kasta si loogu soo dejiyo waxyaabo badan oo badan
[APK] Opera Mini ayaa lagu cusbooneysiiyay iyadoo la hagaajinayo isku soo ururinta xogta
Noocaan cusub wuxuu keenayaa xoqitaan xog oo hagaagsan taas oo macnaheedu yahay inaan keydinno dhowr megabyte mar kasta oo aan u adeegsanno baaritaanka
Sida loo xidido Android-kaaga xitaa Lollipop-ka Android adoo isticmaalaya KingRoot
Qoraalka soo socda waxaan ku tusayaa adiga oo kaashanaya fiidiyoow, sida loo xidido Android-kaaga adoo kaashanaya KingRoot.
Sida loo helo ogeysiisyada marka barnaamij ama ciyaar fiidiyow ah oo ku saabsan Android uu helo qiimo dhimis
Waxaan ku tusineynaa sida loo helo ogeysiiska iibka barnaamijyada iyo ciyaaraha fiidiyowga oo leh barnaamij u shaqeeya sida soo jiidashada.
Sony waxay sii deysaa Android Lollipop 5.1.1 OTA oo loogu talagalay Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR iyo Xperia Tablet Z
Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR iyo Xperia Tablet Z ayaa durbaba helaya Android 5.1.1 Lollipop oo leh astaamo cusub oo ku saabsan waxqabadka iyo xakamaynta codka
5 munaaradood oo bilaash ah difaaca fiidiyowga ciyaaraha waa inaad isku daydaa
Waxaan kuu soo bandhigeynaa shan ciyaarood oo fiidiyow ah oo difaac ah halkaas oo aan ka helno Boqortooyada weyn ee Rush ama Towers N 'Trolls.
Wadada weyn ee loo yaqaan 'Blocky Highway' waxay ka timaaddaa abuurayaasha Waddooyinka loo yaqaan 'Blocky Roads' oo leh qaab muuqaal ah oo gaar ah
Wadada weyn ee loo yaqaan 'Blocky Highway' waa ciyaar orodyahanno aan dhammaad lahayn oo orodyahanno ah oo aad ku raaxeysan karto sawirada qaabdhismeedka qaabdhismeedka qaabdhismeedka wanaagsan ee Minecraft.
Waxaan ku tusineynaa sida Link Bubble u shaqeyso, biraawsarka webka ee goobooyin sabeynaya
Maanta waxaan ku tusineynaa sida ay u shaqeyso Xumbada Xuubka, iyo tan ugu muhiimsan, sida loo qaabeeyo Facebook-gaaga si loo furo xiriiriyeyaasha Link Bubble.
Sida loo helo menu-ka qarsoon ee Android
Maanta waxaan ku tusineynaa koodhka si aad u gasho menu-ka qarsoon ee Android.
Dhis magaalo dhexdeeda aakhiro zombie ah Dib-u-dhiska 3: Burcadda Deadsville
Dib u dhis 3: Gangs of Deadsville waa sharadka cusub ee Sarah Northway si ay kuugu hogaamiso inaad magaalo ka dhisto guud ahaan aakhiro zombie ah.
Deer God, farshaxanka muuqaalka ah ee pixel iyo arcade
Deer Ilaah wuxuu u taagan yahay waxyaabo badan laakiin hal guul iyo wax badan: farshaxankiisa muuqaalka ah ee taxaddar leh ee pixel iyo 3D. Ma waayi kartid tan.
Aan la dilin, toogto kale oo weyn oo ka socda abuurayaasha 'Dead Trigger'
Ciyaaraha Madfinger waxay noo keeneysaa wax toogte leh tayo farsamo oo weyn ka dib dhimashadii aadka u guuleysatay.
[APK] Wifi Keygen, si loo hubiyo heerka amniga ee router-keena Easybox ama "ka xado lambarka sirta ah ee deriskeena Wifi"
Maanta waxaan la wadaagnaa Wifi Keygen codsi lagu hubinayo amniga Wifi-gaaga ama "laga xado furaha Wifi ee deriskeena"
Sida loo cusbooneysiiyo Oneplus 2 Oxygen OS 2.0.2 gacanta
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo cusbooneysiiyo Oneplus 2 Oxygen OS 2.0.2 gacanta ka hor ogeysiinta rasmiga ah ee nooca cusub ee Oxygen Os ee la heli karo.
Sida looga daawado fiidyowyada You Tube daaqadaha dul sabeynaya
Ciyaaryahan adaa kuugu fiican, codsi lagu raadiyay asalka oo karti u leh inuu ku cayaaro fiidiyowyada You Tube daaqadaha dul sabeynaya, ku ciyaarida fiidiyowyada asalka ama ku soo dejinta fiidiyowyo qaabab badan oo fiidiyoow iyo cod ah
Xalka dhibaatooyinka cusboonaysiinta Oneplus 2 adoo adeegsanaya OTA
Maanta waxaan sharxayaa sida loo xalliyo dhibaatooyinka cusbooneysiinta Oneplus 2 iyada oo loo marayo OTA iyada oo aan luminin dammaanadda alaabada rasmiga ah.
LINE wuxuu noo keenayaa bilaabihiisa qeybahaan
LINE waxay ku bilaabeysaa daahfurkeeda qeybahan, taas oo la micno ah barnaamij bilow ah oo leh darbiyada tayo sare leh iyo xulashooyinka qaarkood.
Android Wear ayaa hadda ku habboon macruufka
Maalintii baa timid, Android Wear hadda waxay ku habboon tahay qalabka iOS.
ClearLock ayaa xannibaya barnaamijyada mashquuliya in muddo ah
ClearLock waa barnaamij kuu ogolaanaya inaadan ku mashquulin barnaamijyada kale waqti cayiman. Waxay leedahay sifo gaar ah.
Si dhuumaaleysi ah xabsiga uga bax adigoon qofna ku arkin adiga oo Qaxaya Jiilaal
Qaxootiga Jiilaalka waa ciyaar fiidiyoow ah oo na hor dhigeysa isku dayga inaan kaga baxno xabsi ammaankiisa aad loo ilaaliyo.
Blitzcrank's Poro Roundup, ciyaar madadaalo madadaalo ah oo ka socota abuurayaasha League of Legends
Abuureyaasha League of Legends, Riot Games, waxay noo keeneysaa orodyahankan aan dhammaadka lahayn oo leh dib-u-taabasho la yiraahdo Blitzcrank's Poro Roundup.
Lara-kii ugu fiicnaa ayaa mar kale yimaadda isaga oo wata hal-xidhaale buuxa oo xujooyin leh oo lala leeyahay Lara Croft Go
Lara Croft Go waa sharad cusub oo ka socota Square Enix si ay u dhex gasho ilbaxnimooyin hore oo ay uga soo kabato waxyaalaha lumay.
Dhimashada Socodka: Wadada Badbaadinta, sheekada asalka ah ee gacanta Kirkman ee taleefankaaga casriga ah
Dhimashada Socodka: Wadada Badbaadada waxaa loo sameeyay iyadoo la kaashanayo Robert Kirkman, abuuraha silsiladan la keenay telefishanka.
IGrand iyo iLetric Piano barnaamijyadooda loogu talagalay abuurista muusikada ayaa laga bilaabay Android
Laba barnaamij oo u yimaada xirfadlayaasha muusikada ee leh qalab Android ah oo leh oggolaansho ah inay ku guuleysteen guushooda macruufka.
Twitter-ka ayaa hadda kuu oggolaanaya inaad ku dhejiso fariin ku saabsan boggaaga 'Android' iyo 'iOS'
Twitter ayaa hadda ku dhawaaqay cusbooneysiin ah inuu awood u leeyahay inuu ku dhajiyo fariin ku saabsan boggaaga Android iyo iOS
Google wuxuu "muuqaal" cusub ku siinayaa isdhexgalka natiijooyinka raadinta barnaamijyada
Google wuxuu si weyn u hagaajiyaa natiijooyinka raadinta ee barnaamijyada ka socda Google Now ama barta widget-ka ee widget.
Sida loo ogaado haddii ay na saameyneyso Certifi-Gate
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo ogaado haddii ay na saameyneyso Certifi-Gate iyo sida wax looga qabto kiisaska baaritaanka wanaagsan.
BackPackTrack II, Codsiga ugu wanaagsan ee Android ee lagu qoro goobtaada, ayaa muhiim u ah Mountaineers iyo socodka.
Maanta waxaan soo bandhigeynaa BackPackTrack II, oo ah codsi xasaasi ah oo marka lagu daro duubista goobtaada ay kuu saamaxeyso inaad soo aruuriso xogta sida joogga, talaabooyinka aad ku safartay ama masaafada aad ku soo martay socodkaaga ama safaradaada.
ANDROID ALERT !!: Certifi-Gate, waa u nuglaansho cusub oo khatar ah oo loogu talagalay Android taas oo saameyn doonta malaayiin boosteejo
Tartankan cusub ee ANDROID !! Waxaan kaaga digeynaa nuglaanta cusub ee Android ee loo yaqaan Certifi-Gate
Si dhakhso leh baytariyaal socon kara nolosha aaladda
Tikniyoolajiyad cusub oo elektrolyt ah ayaa u horseedi kara baytariyada cimri dherer ahaan jira
Ballaarinta cusub 'Tartankii weynaa' ee hadda laga heli karo Hearthstone
Hearthstone wuxuu isu muujiyey inuu yahay mid ka mid ah cayaaraha fiidiyow ee ugu wanaagsan ee aan hadda ku haysanno Android.
Si dhakhso leh uga raadi faylasha, xiriirada iyo barnaamijyada ku jira casrigaaga adiga oo wata Andro Search
Raadinta Andro waa barnaamij cusub oo kuu oggolaanaya inaad ku sameyso baaritaanno deg deg ah taleefankaaga ama kaniiniga gebi ahaanba bilaash.
Ku dul sabbayso qaabkeeda 8.0 waxay siineysaa qallooca ogeysiisyada Heads-ka ee Android
Floatify ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 8.0 kaas oo hagaajinaya ogeysiisyada Heads-up ee lagu soo daray Android 5.0 Lollipop.
Baytariyada cusub oo leh ismaamul hal toddobaad ah
Batariyada leh ismaamul wiig ah ayaaba durba run ah waxayna kacaan ka geysan karaan adduunka tikniyoolajiyadda moobiilka
Wuxuush Ate My Metropolis, baabbi'in magaalada by boodbooda iyo soohdin iyo bahalnimo
Monsters Ate my Metropolis waxay ku saabsan tahay wuxuush, ballan aan la aqbali karin oo lagu baabi'inayo magaalooyin dhan oo ciyaartoy kale ah.
Ciyaar fiidiyoow ah oo Zuma u eg oo la socota Kittenball Prince
Kittenball Prince wuxuu dib noogu celinayaa 2003 ciyaarta fiidiyaha ah ee loo yaqaan 'Zuma' taasna dad badan ayaa ku xirmay.
Ka badbaaday Kartuunka, orodyahan aan dhammaad lahayn oo leh nooc ka mid ah dariiqa waddooyinka u ah halyeeyada ugu weyn
Ka-badbaadayaasha Kartoonku waa ciyaar orodyahanno aan dhammaad lahayn oo aan ku caawin doonno dariiqa si uu uga gudbo heerar badan.
Baro adduunyo cusub iyo meerayaal Wadada Luma
Wadada loo maro Luma waa ciyaar fiidiyoow ah oo aan ku dhaqaaqi doonno ujeedada badbaadinta meerayaasha wajahaya isbeddelka cimilada.
Kaboom wuxuu ku siinayaa fariimo is-baabi'inaya oo aad cid la wadaagto
Kaboom wuu ka soocan yahay adeegyada kale sababta oo ah uma baahna qofka qaata inuu isdiiwaangaliyo si uu u helo fariin iskiis isku halisa waqtiga.
Ma fududahay in la saadaaliyo qaabka furitaanka ee aad ugu isticmaasho taleefankaaga casriga ah ee Android?
Daraasad uu sameeyay arday norwiiji ah ayaa ina tusaysa saadaalinta qaababka furitaanka ee aan ugu isticmaalno taleefanka Android.
Taleefoonkaaga soo socda ee Android ma lahaan doono barnaamijyo badan oo Google ah oo horay loo sii rakibay
Bloatware-ka ayaa kaligiis lagu rakibay taleefannada badankood, hadda barnaamijyada Google ayaa ka yar kuwa imanaya xarunta cusub ee Android.
PAC-MAN 256, ciyaaro aan dhammaad lahayn oo ka socda abuurayaasha Waddada Crossy laakiin waa nooc run ah
PAC-MAN 256 waa ciyaarta fiidiyowga cusub ee abuureyaasha Crossy Road waxayna ka timaadaa Namco Bandai si ay noogu keento waxa ugu fiican classic.
Android Wear waxaa lagu cusbooneysiiyay qaybaha is-dhexgalka
Nidaamka hawlgalka Google ee loogu talagalay in lagu xidho dharka, Android Wear, ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 1.3. Waxay keentaa horumar kala duwan sida dhinacyada is-dhexgalka.
[APK] Ka soo degso nooca cusub ee Google Now Launcher tooska ah Android 6.0 Marshmallow
Google Now Launcher wuxuu leeyahay nooc cusub oo ka imanaya aragtida saddexaad ee soosaarayaasha Android 6.0 Marshmallow.
Hordhaca Android M Developer 3 ayaa loo heli karaa qalabka Nexus
Qalabka Nexus ee soo socda ayaa marin u heli kara soo dejinta Android M Developer Falanqeynta 3: Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 iyo Nexus Player
Kala soo bax sawirada Android Marshmallow kuna rakib animation-ka boot qalabkaaga Android
Android Marshmallow waa nooca 6.0 ee shalay la soo bandhigay oo leh bilawga muuqaalka saddexaad
Android 6.0 Marshmallow waa rasmi
Waa timid, waa rasmi. Nooca cusub ee Android waxaa lagu magacaabi doonaa Androdi 6.0 Marshmallow sida Google lafteeda ku dhawaaqday.
Ka badbaada qashinka iyo maareynta hoyga nukliyeerka ee Hoyga dhaca
Hoyga Fallout ee Bethesda wuxuu kugu tuurayaa maamulka hoyga nukliyeerka halkaas oo, si lama filaan ah, waxaa looga tagi karaa dad la'aan.
QKSMS, codsi loogu talagalay farriimaha SMS-ka oo gabi ahaanba noqda mid bilaash ah oo furan
QKSMS waa il furan oo gebi ahaanba bilaash ah barnaamij lagu maareeyo dhammaan farriimahaaga SMS sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Sling Kong, ciyaar fiidiyow ah oo xiiso leh oo soosaarid weyn oo kugu soo jiidan doonta
Sling Kong waa mid ka mid ah ciyaaraha arcade ee gaarka ah ee loogu talagalay Android kaas oo ina xusuusinaya Shimbiraha careysan ama Xariga jar.
La dagaallama kooxaha cadaabta duufaanka tareenka
Duufaan Tareenku waa inuu ku dhacaa maktabadaada fiidiyowga ciyaarta sida arcade weyn oo tayo sare leh iyo tayo leh. Mid ka mid ah kuwa waajibka ah.
Kaararka gurguurta, ciyaar kaar ah oo khaas ah oo isku dhafan kalidaa iyo la dagaallanka wuxuush
Kaararka Crawl wuxuu isku daraa waxa noqon lahaa kali ahaanshaha nolosha oo dhan iyo nooc ka mid ah Sixirka Ururinta. Sharad weyn xagaagan.
Hooyga dhaca, ku dhis hoygaaga nukliyeerka Bethesda
Hoyga Fallout wuxuu ugu dambeyntii ku jiraa Android sida Bethesda ee ugu horreysay ee loogu talagalay ciyaarta fiidiyowga moobiilka, miyaad seegi doontaa?
9 ciyaarood oo fiidiyoow ah oo tayo sare leh oo laqiyaaseynin inaad seegto toddobaadkan
Labadii usbuuc ee la soo dhaafay waxaan fursad u helnay inaan wax ka barano ciyaaraha fiidiyowga ee tayada sare leh ee la bixiyo.
YouTube Live Broadcast ayaa lagu dhawaaqay oo diyaar u ah in lala tartamo Periscope iyo Meerkat
Google waxay dooneysaa inay gasho qeybta tooska loogu tabinayo si ay ula tartanto laba barnaamij oo iyagu iyagu qaata: Periscope iyo Meerkat.
Sida loo rakibo Lenovo Dolby Atmos wax kasta oo Android 4.3 ama terminal ka sareeya ah
Maanta waxaan ku tusineynaa talaabo talaabo ah sida loo rakibo Dolby Atmos oo ka socota Lenvo nooc kasta oo Android 4.3 ama terminal ka sareeya ah.
Muuqaalka Gaarka ah, Feyras cusub oo soo gali lahaa oo ay caawisay Facebook oo saameyn ku yeelan kara aaladda Android, Windows, Mac, Linux, iwm, iwm.
Feejignaanta Fayraska cusub ee soo gali lahaa oo ay caawisay Facebook iyada oo loo marayo farriin gaar ah oo leh fiidiyoow fiidiyoow ah Trojan aad khatar u ah oo gacanta ku dhigi lahaa qalabkaaga.
[APK] Soo dejiso nooca loo yaqaan 'Spotify for Tablets' oo ku dheji moobilkaaga Android
U soo degso barnaamijka 'Spotify apk' ee loo beddelay kiniiniyada si aad ugu rakibto taleefannada Android isla markaana aad u joojiso qasab ku soo celinta qasabka ah.
Sida loogu cusbooneysiiyo Nexus-kaaga balastarka amniga Stagefright
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo cusbooneysiiyo terminaalka Nexus cusbooneysiinta oo ay kujirto baarka amniga Stagefright.
Bestie, barnaamijka Camera360 ee loogu talagalay sawir-qaadista
Bestie waa barnaamij isku dayaya inuu ku xoojiyo sawirada adoo adeegsanaya qalabka wax lagu sawiro.
Sida loo kiciyo Microsoft's Cortana oo ah kaaliyaha codka asalka ah ee Android
On Android waxaad hadda u isticmaali kartaa kaaliyaha codka Cortana qaab ahaan qaabkii ugu dambeeyay ee ay soo saartay Microsoft.
Sida aan uga dhaxlayno cinwaankeena Facebook xubin qoys ama saaxiib
Maanta waxaan sharxeynaa talaabo talaabo ah nidaamka loo raacayo si loo dhaxlo akoonkeena Facebook
Sida looga badbaado Stragefight ugana hortagto moobiilku inuu nugul noqdo
Sida looga badbaado naftaada Stragefight si aad uga badbaado u nuglaanta ugu weyn uguna halista badan ee laga helo Android
Sida WhatsApp-ka loogu kaydiyo Google Drive-ka oo mar kale loo soo celiyo
Maanta waxaan wadaagnaa WhatsApp-kii ugu dambeeyay ee WhatsApp waxaanan ku tusinaynaa sida WhatsApp WhatsApp loogu kaydiyo Google Drive iyo sida hadhow loo soo celiyo.
SPACECOM, istiraatiijiyadda loo qaaday nidaamyada isdhexgalka halkaasoo ay tahay inaad abuurto boqortooyo kuu gaar ah
SPACECOM waxay noo geysaa meel bannaan oo loogu talagalay istiraatiijiyad waqtiga dhabta ah ciyaarta fiidiyowga ah oo waxoogaa ka duwan waxa lagu arko ciyaaraha kale.
Maalin ku taal Kaynta, xujo weyn oo gaar ah oo ay tahay inaad ka caawiso Little Red Riding Hood si uu uga badbaado dhimashada
Ka badbaadi yey yar yar oo yar yar iyo caarada si ay uga caawiso inay gurigeeda ku gaarto maalinta weyn ee kaynta dhexdeeda. Ciyaar fiidiyoow ah oo leh xaqiijin farsamo gaar ah.
Xawaaraha Sare, kula tartama madaxda kooxda gaangiska kale gaarigaaga
Xawaaraha Sare: Jiidida & Tartanka Deg-degga ah waa ciyaar fiidiyow ah oo baabuur lagu tartamo oo aad lagagaga horimaan doono kuwa kale qaabka ugu xafiiltanka badan.
Cliffy bood, adigoo raacaya raadadkii Crossy Road laakiin aragti kale
Cliffy Jump wuxuu na hor dhigayaa ciyaar fiidiyoow madadaalo leh, xiiso leh oo soo jiidasho leh, marka laga reebo inuu na siinayo suurtogalnimada helitaanka 60 jilayaal kala duwan.
Waxaan ku tusineynaa sida loo beddelo daboolka Moto G 2015 si ay u ahaato mid aan biyuhu lahayn
Waxaan ku tusineynaa sida loo badalo daboolka dambe ee Moto G 2015 si aadan u lumin ka hortagga biyaha oo aad taleefankaaga ugu beddesho miisaan culus
Doogee wuxuu ku dhawaaqay Doogee Y100 Plus
Doogee wuxuu ku dhawaaqay mobilo cusub, waa Doogee Y100 Plus. Terminal hagaajinaya qalabka Y100 maaddaama uu yeelan doono shaashad iyo bateri dheeraad ah
7 ciyaarood oo fiidiyoow badan oo fiidiyoow ah oo lagu ciyaari karo qad la'aan
Iyada oo 7-da kulan ee fiidiyowga ah uma baahnid inaad lahaato xiriir xog si aad ugu raaxeysan karto ciyaar wanaagsan saaxiibbadaa.
Dareemayaasha faraha Android: amni darro marka la barbar dhigo Aqoonsiga Taabashada
Dareemayaasha faraha badan ee soo noqnoqda ee aaladaha sare ee Android ma gaaraan heerka amniga ee Touch ID uu sameeyo.
Alphabear, xujo wanaagsan oo kaa caawin doonta inaad horumariso Ingiriisigaaga
Haddii aad rabto inaad erayo badan hesho si aad u muujiso sida aad ugu fiican tahay Ingiriisiga, ha seegin ballanta aad la leedahay Alphabear.
5 ka mid ah kuwa fiidiyowga aan tooska ahayn ee fiidiyaha ah ee Android
5 ciyaarood oo fiidiyow ah oo aan caadi ahayn oo ku saabsan Android oo kaa dhex qaadi doona heesaha bardhka, dagaalka Orwellian ama istaraatiijiyada ugu nadiifsan.
4 barnaamij si looga saaro jillaab aad ku haysato taleefankaaga casriga ah
4 barnaamij oo soo gali doona si loo xakameeyo ku daristaada casriga casriga ah ee Android. Tani waxay kuu fududeyn doontaa inaad naftaada furtid.
Z St Soldiers, nooc istiraatiijiyadeed ah ayaa ku soo laabanaya culeyska taleefankaaga casriga ah ee Android
Istaraatiijiyadda waqtiga-ugufiican ee qalabka Android ee leh Z Steel Soldiers iyo cinwaannada dhiirrigeliya sida Blizzard's Starcraft.
5 ciyaarood oo fiidiyow ah oo kala duwan oo loogu talagalay Android
Waxaa jira ciyaaro badan oo lagu tartamo Android, laakiin kuwa aan soo qaadano xirmadan shanta ah waxay leeyihiin wax ka duwan kuwa kale.
Ogaanshaha iyo adeegsiga Periscope, adeegga socodka waqtiga-dhabta ah
Periscope waa mid ka mid ah isbeddellada adduunka ee hadda loogu talagalay socodka waqtiga-dhabta ah. App si dhow ugu xiran Twitter.
Agar.io, ciyaar fiidiyoow fowdo ah oo ay tahay inaad wax ku cuntid ama lagu cuno
Fowdo waxay ku timaadaa taleefankaaga casriga ah gacanta Agar.io iyo qaybteeda weyn ee ciyaartoy badan oo aad wajihi doonto boqolaal ciyaartoy ah.
6 Ciyaaraha fiidiyowga ee 'Endner Endless' waa inaad iskudaydaa Android
Orodyahanka aan dhammaadka lahayn waa mid ka mid ah qaybaha ugu badan ee fiidiyowga lagu ciyaaro ee Play Store-ka ah oo u muuqda inuu leeyahay wareegyo ama khariidado aan dhammaad lahayn.
3 barnaamij oo tayo sare leh oo Android ah oo aadan ka heli doonin Play Store-ka
3 barnaamijyada Android ah oo aad si bilaash ah kaliya kala soo bixi kartid banaanka Play Store. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu ka kooban yahay noocyo kale.
Sida loodaro oo loo xiro nidaamka tabka ee Chrome oo looxa Android Lollipop
In Android Lollipop-ka kumbuyuutarka biraawsarka Chrome wuxuu leeyahay nidaam tab cusub oo aan ku barinayno inaad ka joojiso boostadan.
MMORPG cusub ayaa la imanaya Android leh Forsaken World Mobile
MMO wanaagsan oo xagaagan lala qaato Forsaken World Mobile oo ka imanaya istuudiyaha khibrad u leh nooca ciyaarta PC-ga.
Miui V7 oo ku saleysan Android Lollipop ayaa la heli doonaa bisha Ogosto
Toddobaadka soo socda Xiaomi wuxuu nagu martiqaadayaa munaasabadda bandhigga ee nooca cusub ee Miui V7 oo ku saleysan Android Lollipop.
8-da kulan ee ugu caansan video poker on Android
Waxaan ku jirnaa xagaaga waxaadna dooneysaa mar walba ciyaar turub iyo wax ka badan haddii ay ka socoto moobilkaaga halkaasoo aad ka heli karto barnaamijyada turubka ugu fiican.
Laba daalacashada shabakadaha oo aad u dheereeya oo isticmaala xusuusta aad u yar
Waxaan ku tusineynaa labo daalacda shabakadaha oo la yimaada Android iyadoo ujeedadu tahay in la isticmaalo xusuus yar isla markaana ku habboon kumbuyuutarrada waxqabadka hooseeya.
Turbo Alarm, oo ah barnaamij saacad qaylo-dhaan oo bilaash ah oo ikhtiyaarro badan leh
Turbo Alarm waa barnaamij gaar ah sida saacadda alaarmiga oo si fiican u beddeli karta midda ku timaadda Android.
Sida loo galo Netease-ka Android lafteeda talaabo talaabo
Maanta waxaan sharxeynaa sida looga soo galo Netease-ka Android-keena iyo wax ka yar 2 daqiiqo.
Ka badbaadi holocaust-ka Xafiiska Musiibooyinka, ciyaar fudud laakiin soo jiidasho leh
Xafiiska Musiibo waa ciyaar ay ka badbaadayaan masiibooyinka dabiiciga ah inay tahay himiladayada ugu weyn. Hawada Retro iyo pixelated ee muuqaalka ah.
[APK] Soo dejiso oo rakib nooca cusub ee ES Material Design File Explorer
Halkan waxaad ku haysaa apk si aad u soo dejiso oo aad u rakibto nooca cusub ee ES Material Design File Explorer
7 ciyaarood oo fiidiyoow ah oo badbaado ah oo loogu talagalay qalabkaaga Android
Mawduuca zombie-ku wuxuu ka xoog roon yahay kuwan 7 kulan oo fiidiyoow ah oo badbaado ah in kastoo ay jiraan waxyaabo kale oo lama filaan ah sida aad arki karto.
4 Barnaamijyada jimicsiga ee aadan tabi karin
Maalmahan xagaaga waxaan ogaan karnaa inaan u baahanahay jimicsi jirkeena. 4 barnaamij oo kuugu soo hagaagaya jir dhiska
Tinycore, waa barnaamij lagu xakameeyo processor-ka iyo RAM-ka casrigaaga
Tinycore waa barnaamij yar oo kormeera xaalada batteriga, processor-ka iyo RAM-ka xusuusta laga soo raaco barta ku taal taleefankaaga Android.
HTC One M9 iyo One M8 ayaa loo cusbooneysiin doonaa Android 5.1.1 Lollipop
Telefoonada HTC One M9 iyo HTC One M8 ayaa loo cusbooneysiin doonaa noocii ugu dambeeyay ee hadda jira, Android 5.1.1 Lollipop dhawaan.
Argaggixisada waxay la soo noqotaa Shan Habeen Freddy's 4
Shanta habeen ee Freddy's 4 waxay na tusaysaa inaad ka baqi karto inaad ku ciyaarto fiidiyow sidan oo kale ah Android.
Deadlock: Khadka tooska ah, toogte ciyaartoy badan oo aan ugu dambeyn ku haysanno Android
Waad la ciyaari kartaa kumanaan ciyaartoy leh toogashada multiplayer ee hadda ka timid macruufka waxaana loo yaqaan 'Deadlock: Online'.
Filim Hollywood ah Stuntman oo uu weheliyo Stuntman Stuart
Baro wax ku saabsan nolosha Hollywood stuntman ilaa dhow ciyaarta fiidiyaha wax yar oo cirrid ah Stuntman Stuart.
Boqorka xaafada iyo kubbadda koleyga oo leh Ball King
Ball King waa ciyaar fiidiyow ah oo saaxiibtinimo leh taas oo ay tahay inaad ku dhaliso wax kasta oo ay ku siiyaan dambiisha xaafadda.
Hadda waxaad ku diri kartaa farriimo khaas ah khadka tooska ah FireChat
Khadka tooska ah waxaad ku diri kartaa farriimo khaas ah adoo adeegsanaya barnaamijka fariimaha ee FireChat adigoo adeegsanaya isku xirnaanta sida Bluetooth ama Wi-Fi.
Volkswagen waxay ku dhawaaqeysaa qorshooyinka loogu talagalay Android Auto
Volkswagen waxay ku biirtay safafka Hyundai, Honda, Buick, Chevrolet, Cadillac iyo GMC si loogu daro Android Auto gawaaridooda.
Sidee shanlada loogu sameeyaa WhatsApp
Shanlada caanka ah ee WhatsApp hadda waa la heli karaa, tan awgeed waa inaan qaadnaa tillaabooyin aad u fudud si aan ugu raaxeysanno emoticonkan.
Sida kaliya ee loogu raaxeysan karo WhatsApp-ka loox Android ah
Maanta waxaan ku baraynaa inaad ku raaxeysatid WhatsApp kiniinka Android qaab gebi ahaanba sharci ah oo oggolaaday WhatsApp
Casharbarka - Sida loogu banneeyo booska Android waxqabadka wanaagsan
Waxaan kuu sharraxeynaa siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu banneeyn karo booska Android. Waxay hagaajin doontaa waxqabadka iyo awoodda taleefankaaga casriga ah, iyo dhammaantood qaab fudud.
Khiyaanooyinka Chrome OS iyo Casharrada - Qaybta 2
Waxaan soo bandhigeynaa qeybta labaad ee casharrada loo hibeeyay nidaamka qalliinka ee OS OS. Tan waxaan inta badan ka qaban doonnaa is waafajinta Android.
Sida loo helo martiqaad lagu iibsado OnePlus 2
Waxaan ku tusineynaa sida loo helo casuumaad aad ku iibsato OnePlus 2 bisha Ogosto 11 markay bilaabeyso.
FARSAMADA ANDROID !!, Malware-ga cusub ee saameeya 95% ee terminaalka Android
Malware cusub ayaa la ogaaday oo saameyn ku yeelan kara 95% ee terminaalka Android, oo ay ku jiraan noocyadii ugu dambeeyay uguna dambeeyay ee Android.
Khiyaanooyinka Chrome OS iyo Casharrada - Qaybta 1
Waxaan u soo qaadanaa talooyin waxtar u leh nidaamka hawlgalka ee Chrome OS. Waxaan ku tusineynaa toobiyeyaasha ugu fiican iyo sida loogu daro kantaroolka waalidka casharka.
Manuel Ramírez Barnaamijyadiisa Ugu Caansan
Codsiyada aan ugu jeclahay ee aan ku rakibey taleefankayga casriga ah ee Android oo iga caawiya inaan wax soo saar badan yeesho ama aan helo waqtigayga firaaqada.
[APK] Fallaarta Fallaarta, shirkadda cusub ee Microsoft ee loo yaqaan 'Android'
Microsoft waxay mar kale nagula yaabtay barnaamij tayo sare leh oo leh Arrow Launcher, oo ah barnaamij bilaabaya oo aadan tabi karin.
Mashiinka, noqo dhibic khad madow ah ciyaar fiidiyoow ah oo leh muuqaal qurux badan
Mashiinka ayaa ah ciyaar fiidiyow oo aad u qaas ah oo loogu talagalay muuqaalkiisa taabashada iyo habkaas oo ah in nalagu qanciyo madow iyo caddaan wax walba daadad galiya.
Ku bood dusha tiirka si aad uga fogaato buuraha iyo caqabadaha leh Vault!
Vault! waa kii ugu dambeeyay ee ka socda Nitrome, istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga oo muujinaya shaqadiisa wanaagsan ee leh fiidiyowyo madadaalo leh oo tayo sare leh oo farsamo leh.
Gebi ahaanba tacaburtii garaafka ayaa nagu soo laabanaysa Gabriel Knight: Dembiyada Aabayaasha
Gabriel Knight: Dembiyada Aabbaha waxaa sii daayay Sierra Leone sanadka 1993, hadda waxay ku noqotaa Android ka dib markii dib loo cusbooneysiiyey sanadkii hore.
Waxyaabaha ayaa mar kale ari u socda oo leh Mountain Goat Mountain
Mountain Goat Mountain waa goob faneed fiican oo raaxo leh halka riyaha ay ku kori doonaan meelaha dhaadheer iyaga oo la boodaya iyo dhaqdhaqaaqyo qurux badan.
3 barnaamij si loo hagaajiyo khibrada ogeysiiska shaashadda qufulka ee 'Android Lollipop'
Seddex barnaamij oo shaashad quful ah oo ku saabsan Lollipop-ka Android oo kor u qaadaya waayo-aragnimada isticmaalaha oo leh astaamo qabow.
Dhacdo cusub oo Game of Thrones ah oo hadda laga heli karo Dukaanka Play
Waxaan horeyba u haysannay dhacdo cusub oo ah Game of Thrones oo la heli karo oo laga soo dejisan karo Google Play Store.
[APK] Soo dejiso oo rakib nooca cusub ee Sawirada Google oo leh astaamo badan oo cusub
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa nooca cusub ee Sawirada Google oo ay ka buuxaan warar xiiso leh oo ku saabsan xakameynta albamkeena.
TapDeck, ku hel sawiro cusub oo tayo sare leh maalin walba taleefankaaga casriga ah
TapDeck waa barnaamij marka laga reebo helitaanka sawir-qaadayaal tayo sare leh, leh shaqooyin shabakad bulsheed si loo helo loona wadaago waraaqaha.
[APK] Soo dejiso hadda qaabka cusub ee WhatsApp oo ay ka buuxaan warar xiiso badan
Maanta waxaan soo bandhigeynaa oo daaha ka rogaynaa nooca cusub ee WhatsApp oo ay ka buuxaan warar xiiso badan.
Cusbooneysiinta Android 5.1.1 Lollipop ayaa timid Sony Xperia Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 iyo Z2 Tablet
Android 5.1.1 ayaa halkan loogu talagalay aalado kala duwan oo kala duwan oo ku kala jira Xperia Z: Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2 iyo Z2 Tablet
Smart Screen On Off, si aad ugu raaxaysato shaashad casri ah oo ku taal barta aad ku shaqaysato ee Android
Maanta waxaan kugula talineynaa barnaamijka 'Smart Screen On Off' ee bilaashka ah, oo ah barnaamij ku siin doona terminal-kaaga Android adeegsiga shaashadda casriga ah.
Haddii aadan haysan Lollipop-ka Android, waxaan ku tusi doonnaa sida ugu wanaagsan ee aad u aragto ogeysiisyada oo aad ula fal gasho. Codsiga waa mid fudud oo bilaash ah.
In kasta oo ay xoogaa ka yar tahay waxa naqshadeynta ah, Qaylo-dhaanta 'Gentle Alarm' waxay u taagan tahay noocyadeeda kala duwan ee xulashooyinka badan marka la barbar dhigo barnaamijyada kale ee qaabka.
Kuwani waa barnaamijyada uu jecel yahay Francisco Ruiz: Codsiyada Muhiimka u ah barnaamijkeyga Android
Maanta waxaan kuu soo bandhigayaa codsiyada lagama maarmaanka u ah Android-kayga, waxaan ahay Francisco Ruiz waana tan waxa aan ka maqnaan karin terminalkeyga Android.
Sawirrada Google+ ayaa xirmaya Ogosto 1, waqtiga loo beddelayo Sawirada Google
Sawirada Google + waxay xirayaan 1-da Ogosto si loogu banneeyo Google Sawirrada, barnaamijka cusub ee madax-bannaan ee Google kaasoo daryeelaya dhammaan sawiradaada
[APK] Soo dejiso oo rakib nooca ugu dambeeya ee You Tube adoo wata horumarin cusub oo xiiso leh
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo soo dejiyo loona rakibo nooca ugu dambeeya ee You Tube si aad ugu raaxeysato dhammaan astaamaheeda cusub ka hor qof kale.
[APK] Waxkasta oo aad adigu Soodejiso Tube Waxaad na siiso, codsiga si aad u daawato oo aad kala soo baxdo waxyaabaha ku jira You Tube si toos ah Android kaaga
Maanta, marka laga reebo wadaagista APK-ka ee 'OG You Tube Downloader', waxaan sidoo kale ku tuseynaa habka ugu fudud ee loogu adeegsado fiidiyowga.
Barnaamijka 'Hyperlapse' ee Microsoft ee sameynta fiidiyowga waqtiga-luminta ah ayaa hadda loo heli karaa qof walba
Hyperlapse waa barnaamij cusub oo loo heli karo qof walba ugu dambeyntii ka dib markuu ka tago beta inuu ahaa kaliya qalabka qaar.
Dagaal istiraatiiji ah ee boqoshaada leh Dagaalkii Mushroom: Booska!
Dagaallada Mushroom: Booska waa ciyaar istiraatiijiyad wanaagsan oo lagu ciyaaro ciyaaro wanaagsan oo ka yimaada Shabakadda PlayStation.
Ku daydo Rafa Nadal oo la socda Booqashada Tennis-ka Stick
Simulator jilicsan oo leh Stick Tennis Tour oo na hor dhigaya ciyaaro dhaqso badan oo lagu xallin doono dhowr ilbiriqsi.
Wicitaanka Mini Squad, ka badbaadi hecatomb zombie kooxdaada
Wicitaanka Mini Squad waa goob arcade ah oo aan ku layn doonno kooxo badan oo zombies ah kooxdeena dagaalyahannada ah.
Android 5.1.1 ayaa imaan doonta Xperia Z2 iyo Z3 dhamaadka July
Sony waxay xaqiijisay in qalabkeeda Xperia Z2 iyo Xperia Z3 lagu cusbooneysiin doono Android 5.1.1 ka hor dhamaadka bisha July.
Thunder Jack's Log Runner, xaabiyaha leh hawada socod lugeeye oo si rajo la'aan ah kuu xidhi doona
Thunder Jack's Log Runner wuxuu ku dhejinayaa booska aadan ka soo dhicin qoryo oo uu ku dhaco biyaha.
Cloudifile-ka loogu talagalay iskudhafka Android isla markaana ku kaydiya xogta faylka Dropbox kombiyuutarkaaga
Cloudifile wuxuu la yimaadaa hadafka ah bixinta amniga iyo asturnaanta weyn ee faylasha Dropbox ee aan ku haysanno kombiyuutarka.